Haweenka Xildhibaannada ah oo doortay guddoon cusub |
Haweenka Xildhibaannada ah oo doortay guddoon cusub
Published on June 9, 2014 by clomid for sale, lioresal online. Mowliid · No Comments · 92 views
Xildhibaannada Haweenka ah eek u jira baarlamanka ayaa doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen.
Kulanka lagu dooranayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka xildhibaanada haweenka ee barlamanka ku jira ayaa waxaa ka qeybgalay wasiir ku xigeenka wasaarada haweenka xukumada Somalia, iyo xildhibaano kale.
Doorashada ayaa waxaa ku tartamayaay laba xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamanka kuwaas oo kala ahaa Caasha Koosh iyo Bii Bii Khaliif, waxaana gudoomiyaha ku guulaysatay BiiBi khaliif Maxmed halka ku xigeenada koowaad iyo labaadna ay ku guulaysteen Maryan Macalin Isxaaq iyo Qaali Axmed Diiriye kadib codadkii ay dhiibteen xildhibaanadii kulanka goob joogga ka ahaa.
Wasiir kuxigeenka haweenka Muno Abiikar oo kulanka goob joog ka ahayd ayaa ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ay sameeyeen xildhibaanada haweenaka ee baarlamanka iyadoo mas’uuliyiinta la doortay ugu hambalyeeysay xilka loo doortay.
Gudoomiyaha hawenka barlamanka ee la doortay iyo ku xigeenadeeda ayaa uga mahad naqay xildhibaanadii codkooda siiyay si ay hoggaan u sameystaan haweenka xildhibaanada ah eek u jira Baarlamanka.
Arintani ayaa dhiiri gelinaysa doorka xildhibaanada hawenka ah ay ka qaadan karaan u adeegida bulshada, waxeyna haweenkaasi ka mid yihiin gudiyada kaladuwan ee barlamanka.